Jly Ramakavelo Désiré : “Tsy hoe afa-manao danin’ny kibo rehefa mpitondra” | NewsMada
Jly Ramakavelo Désiré : “Tsy hoe afa-manao danin’ny kibo rehefa mpitondra”
“Ny tena mampalahelo, tsy fantatra intsony: mbola misy lalàna mifehy ve, rey olona, eto Madagasikara? Ampiharo ny lalàna na amin’iza na amin’iza. Fa tsy hoe afa-manao danin’ny kibo rehefa mpitondra fanjakana. Na hoe afa-manao izay tiana atao rehefa teo amin’ny fitondrana teo aloha? Tsia.”
Io ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny Fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly Ramakavelo Désiré, teny Andrainarivo, afakomaly, momba ny disadisa eo amin’ny fanjakana foibe sy ny filoha teo aloha, Ravalomanana, ny amin’ny tany eny Andotapenaka. Misy izao ny fisavoritahana, fifandonana, fanapotehana…
Misy ny tsy fanarahan-dalàna
Amin’izao fotoana izao, efa nisy ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa, fitokonana etsy sy eroa, efa nisy ny fahasahiranana eo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana… Izany rehetra izany, mbola ampiana mpanao politika avo lenta manao zavatra tsy ara-dalàna.
Raha vao mahita ny olona, manao hoe: iza no manana ny marina amin’izy roa lahy ireo, iza no tena manara-dalàna? Rehefa mandinika sy mieritreritra ny tena, samy olona tsy misy manara-dalàna ireo. Izany ve no ekena hoe hitondrana ny firenena? Tsy mety ange izany, araka ny fanazavany.
“Tsy maintsy misy fifampifehezana ny zava-drehetra. Ary ahafahana mampanjaka ny fifampifehezana ny fampiharana ny lalàna velona”, hoy izy.